Hurumende Yotenda Kuti Zvinhu Hazvina Kumira Zvakanaka kuZvikoro Zvichangovhurwa
r number of pupils, more teachers and other related measures to enable children to resume their education withou
Hurumende yazotenda nemusi weChina kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka muzvikoro zvakavhurwa nemusi weChipiri varairidzi vachibva vatanga kuramwa mabasa vachiti havasi kufara nemari dzavari kutambiriswa.
Asi hurumende yakumbira kuti vadzokore kumabasa zvichemo zvavo zvichigadziriswa.
Mumashoko avo kudare, reNational Assembly zvichitevera chikumbiro chenhengo dzedare iri, gurukota rezvedzidzo yepasi VaCain Matema vati kunyange hazvo vana vachikoro vakauya vakawanda sezvaitairisirwa, varairidzi vakawanda havasi kuenda kubasa sezvo vari kunyunyuta kuti mari dzavanotambira dzishoma.
VaMathema vakumbira varairidzi kuti vadzokere kubasa vachiti hazvina musoro kuti hurumende irambe ichavabhadhara mari shoma iyoyo ivo vasingashande.
Vati munyika mune varairidzi vanodarika zviuru makumi maviri vakadzidzira basa, asi vasiri pabasa, uye vachaedza napose pavanogona kuona kuti vapinzwa basa kuti vatore nzvimbo dzevarairidzi vasiri kuenda kubasa.
VaMathema vatiwo zvikoro zvisina mvura kana zvinhu zvekudzivirira varairidzi nevana kubva kuCovid-19 zvinofanira kuramba zvakavharwa kudzamara zvinhu zvese zvagadziriswa.
Nhengo dzeparamende kubva kumapato ese hadzina kufara nemhinduro dzavaMathema uye dzavaudza kuti hurumende inofanira kugadzirisa nyaya dzemihoro yevarairidzi.
Sachigaro vekomiti inoona nezvedzidzo yepasi, Amai Priscillar Misiharambwi Mushonga, vati hurumende inofanira kugadzirisa nyaya yevarairidzi nekukasika vachiti hazvibatsira kurega vana vari kuzvikoro zvisina varairidzi.
VaMathema vati zvichemo zvevarairidzi zviri kugadziriswa nebazi revashandi pamwe nePublic Service Commission asi pari zvino chavanoda kuti muzvikoro muve nevarairidzi.
Zvichakadai masangano ose anomirira varairidzi munyika aburitsa mashoko pamwe chete achiti varairidzi havafanira kutyidzirwa kuti vachadzingwa mabasa vachiti izvi hazvisi kuzoitika.
Ati nhengo dzeparamende, vedzisvondo neveruzhinji vanofanira kutsigira varairidzi pamatambudziko avakatarisana nawo.
Mubati wehomwe musangano reProgressive Teachers Union, VaLadistous Zunde, vaudza Studio 7 kuti VaMathema vanofanira kugara pasi nevarairidzi kuti vagadzirise dambudziko kwete kuvatyisidzira.
Munyori mukuru musangano reZimbabwe Rural Teachers Union, VaFambai Fambai, vaudza Studio 7 kuti vave kutoda kuti mutungamiriri wenyika apindire panyaya iyi.
Masangano ose gumi anomirira varairidzi kusanganisira Teachers Union of Zimbabwe, Zimbabwe Teachers Union, Almagamated Rural Teachers Union of Zimbabwe neZimbabwe National Teachers Union nemamwe anoti nhengo dzawo dzinodarika zviuru zana hadzikwanise kuenda kubasa nekuti mari dzavo dzemihoro hadzichakwani.
Varairidzi vanoti kuti vararame zvakanaka nemhuri dzavo vanoda kubhadharwa mazana mashanu nemakumi mashanu emadhora ekuAmerica pamwedzi.